प्रियंका र आँचलपछि अहिले केकी अधिकारीको बिहेको चर्चा ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/प्रियंका र आँचलपछि अहिले केकी अधिकारीको बिहेको चर्चा !
4,336 Less thanaminute
काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यतिबेला नायिकाहरुको विबाह गर्ने लहर नै चलेको छ । नायिका ऋचा शर्माले लगनगाँठो कसे लगत्तै यो वर्ष मात्रै नायिकाद्धय प्रियंका कार्की र आँचल शर्माले आ आफ्ना प्रेमीसँग विबाह गरे ।
त्यसअघि नायिका वर्षा राउतले प्रेमी संजोग कोइरालासँग विबाह गरिन् ।केकी पछिल्लो समय चलचित्र निर्माण र कार्यक्रम उत्पादनमा ब्यस्त छिन् ।केकीकै निर्माणमा स्ट्याण्डअप कमेडी शो कमेडी च्याम्पियनको पहिलो सिजन सम्पन्न भयो । हालै विबाह बन्धनमा बाँधिएकी नायिका आँचलको बिहे खान पुगेकी नायिका केकी अधिकारी भने अझै अविबाहित छिन् ।
उक्त समारोहमा नायिका केकीलाई अब पालो केकीको भन्ने सुझाव समेत दिन भ्याए । सो अवसरमा उपस्थित कलाकारलाई अब कसको बिहको भोज खाने भनी राखिएको जिज्ञासामा धेरैले केकी नाम अगाडी सारेका छन् । तर केकीले यो अवसर कहिले देखिन् त्यो समयले नै देखाउला ।
स्कुल जानुपर्ने बालकहरू मजदूरी गर्न कालापहाड
काठमाडौमा देखिएका कोरोना संक्रमित कहीँ कतै यात्रा नगरेको पाइयो